एकतारे: मलाई बिहे मनपर्दैन
मलाई बिहे मनपर्दैन
मलाई बिहे मनपर्दैन ।
मैले यो भन्दा खेरि संसार रिसाओस् मतलब भएन, मेरी श्रीमति रिसाउनु भएन । खासमा मलाई बिहे मन नपरेको हैन । मन नपरेको भए बिहे गर्ने नै थिइन । बडो दुःख गरेर, हतार गरेर गरेको पो त । खासमा मलाई बिहेमा हुने जमघट मनपर्दैन । हैन, हैन । जमघट मननपरेको पनि हैन । बिहेको तडक भडक मन नपरेको हो । हाम्रो समाजले उत्सवका रूपमा मनाउने दुइ युवाको मिलनमा देखाउनैका लागि गरिने तामझाम मनपरेको । मेरो यो मननपराई बाँकी संसार छाडम्, मेरै आफ्नै श्रीमतीलाई पनि मन पर्दैन होला ।
२०७६ फागुन ३० गते बिहे गरिएको थियो । अलि पछि बिहेभोज गरुँला जस्तो लागेको थियो । तर कोरोनाले देशलाई छपक्कै छोपेपछि त्यो पनि जुरेन । केही समय रोल्पामा क्वारेन्टाइन लागू गर्दै बित्यो । केही समय काठमाडौंमा लकडाउन मनाउँदै बित्यो । अर्को महिना, अर्को साल भन्दै एक वर्ष बित्यो । स्थिति सामान्य भइसके जस्तो लागेको थियो, एक्कासी नयाँ भेरिएन्ट आइपुग्यो । पुरानो कोरोनाले हाम्रो जीवनशैली नै नयाँ बनाइ दिएको थियो, नयाँ कोरोनाले त्यही नयाँ कै बानी लगाउनू भन्ने आदेश दिएको छ।
यत्रतत्र बिरामी छन् । अलि छेउ मै शुक्रराज अस्पताल छ । संसारले टेकु अस्पताल भनेर चिन्छ । हरेक दिन पाँच छ चोटी कर्कश आवाजमा एम्बुलेन्सको आवाज सुन्न पर्छ । हिजो भर्खर थाहा भयो, त्यो साइरन शववाहनको रहेछ । आफन्त, साथी बिरामी परेर आफू पनि बारम्बार त्यही अस्पताल जानु परेको छ । अक्सिजनको कमी भइसकेको छैन, शय्या र आइसियुका लागि पालो कुर्न पर्छ भन्ने चैं थाहा भयो । आइसियुमा कोही मरेपछि अर्कोले पालो पाउने रहेछन् । कसैको मृत्यु, कसैको जीवन जोगाउने अवसर बनिरहेको छ।
साथीहरूको परिवार पनि बिरामी छन् । धेरैजसोलाई कोरोना सर्नुको कारण भनेको बिहे भोज नै हो भन्ने निर्क्यौल छ । एकजना त डाक्टरै हुन् । कोरोना सङ्क्रमण रोकथाममै काम गर्ने गर्छन् । उहाँकै श्रीमती सङ्क्रमित हुनुहुन्छ । बिहे भोज खान जानु भएको रहेछ । अर्को साथीको घरमै बिहे थियो । वर र वधू दुवै पक्षका परिवार बिरामी छन् रे ।
कार्यालयमा पिसिआर परिक्षण गराउनेहरूको लाम छ । त्यो लाम लागेका मध्य लगभग आधाउधि कोरोना सङ्क्रमित भनेर प्रमाणित हुन्छन् । कतिपय अति बिरामी परेर आएकै पनि हुन्छन् । जोखिम सबैभन्दा बढी यहीँ छ । साथीहरू बारम्बार सम्झाउँछन्, यसरी भीडमा नजानु है, फेसशिल्ड लाउनुस्, ग्लब्स खै? बरू गाउन नै लाएर बस्नुस् । धेरैजसो समय यादै हुन्न । आज साथीले फेसशिल्ड हातैमा ल्याएर राखिदिइन् । मैले उनलाई भगवान मानेँ । तेरो जीवन जोगा है भनेर सम्झाउने भगवानै हुन् । ड्युटी अवधि भर पिपिई, मास्कमा बसेका सहकर्मीहरूको आँखाले मात्र चिन्दो रहेछु । उनिहरूले फेसबुकमा राखेको फोटो हेर्दा ट्वाँ पर्छु । दिउँसो देखेको अनुहार र यो अनुहार एकै मान्छेको हो र भनेर ।
जिन्दगी चलिराख्या छ । यो चलि नै रहने छ ।
अस्पतालमा काम गर्नेलाई पनि विस्तारै मृत्यु सामान्य लाग्दै जाला । समाजमा पनि "ए त्यो पनि कोरोनाले थला परेछ" भन्ने बानी पर्ला । बिहेवारी पनि चलि नै रहला । भोजभतेर पनि बन्द कहाँ हुने हो र? सरकारको एकजना मन्त्रीले भेला नगर्नू है भनिरहँदा अर्का ठूला मन्त्रीले एउटा सिमेन्टको ठाँडो उद्घाटनमा भेला आयोजना गरिरहेकै देखिएकै हो । सरकारले केही गरेन भनेर उफ्रिने प्रतिपक्षका पनि जिल्ला भेलाको फुर्ति नदेखिएको कहाँ छ र?
मलाई जमघट मनपर्दैन । अरूलाई मनपर्न पाउँछ ।
मलाई जमघट मनपर्दैन । तर म आफै दैनिक ३०० जनाको जमघट व्यवस्थापनमा आफ्नो रूचीले खटिरहेछु ।
मलाई बिहे मनपर्दैन । अरूले त मनपराउन पाउन्छन् नि ।
Posted by Ektaare at 9:57 AM
Labels: Blog, Diary, गनथन
Saman August 21, 2021 at 4:58 AM
I commend your writing and yes I also don't like wedding ceremony and reception, stubborn commitments.
Keep up managing crowds but be cautious ! You all are truly doingagood job. Hats off Ektare ����
साथीले बडो माया गरेर एकथान ब्लुटुथ हेडसेट पठाइ दिए । बडो गजबको चीज भेटिएजस्तो भयो । तार नलाग्ने, कानमा लगाएपछि बाहिरको केही नसुनिने । संसारब...
ओ पहाडिन! तोहार हमार कौन कौन चीज मिलत है? मन मिलत है सोच मिलत है भविष्य कय योजना मिलत है नाहीँ मिलत है तो खाली ई नाम कय पिछे आय...
एकाबिहानै आँखा खुल्यो । छामछाम छुमछुम गर्दै छेवैमा रहेको मोबाइल समातियो र टुइटर खोलिहालियो । केही दिन अगाडी लेखिएको टुइटमा रिटुइट भएको नो...
त्यही काख सिरान थियो (गजल-६१)
सपनाका बोझ थाम्ने त्यही काख सिरान थियो बिसाएछु जीवन त्यहीँ जहाँ मेरो चिहान थियो अँधेरोमा खोजेँ खुबै ज्योतीका ति झिल्काहरू थाकि जब आँखा च...
त्रिशुली किनार हुँइकिदाँ - २
त्रिशुली किनार हुइँकिदाँ -१ बाट अगाडी अघि बढ्नु अघि रोमाले फेरी सम्झाए, घुमाउरो बाटो छ अलि सावधान भएर चलाउनु । ३० -४० को स्पीड मा...
मलाई बिहे मनपर्दैन । मैले यो भन्दा खेरि संसार रिसाओस् मतलब भएन, मेरी श्रीमति रिसाउनु भएन । खासमा मलाई बिहे मन नपरेको हैन । मन नपरेको भए ब...
म गन्दैछु (गजल - ८७)
दूर आकाश भरी तारा जमात भए । म गन्दैछु कति रहर बर्बाद भए ।। भेट भ'को हिजै जस्तो मात्र लाग्छ? पुरानो भो साथ अनि ती याद भए ।।
जन्मिना साथ मरेको एक कृषक
- लक्ष्मण गिरी (तिलौराकोट, कपिलवस्तु +२ पढ्ने ताकाको कुरा हो। क्यालेन्डरमा वि.स. २०५९ चैत्र थियो । १० कक्षासम्म कृषि पढेको थिएँ । सामान...
जति डुब्यो, त्यती गहिरो जता तान्यो, त्यहीँ पहिरो पाइला चल्यो, धर्ती भास्सिन्छ भाग्य पापी, खन्छ खोइरो उडन खोजेँ, खोलेँ पखेटा जता हेर्यो, त्...
१.बुझाउन मनका कुरा म कवि बनेँ स्वरूप आफ्नो भुली तिम्रो छवि बनेँ मुटु छेउ लुकेको माया कहाँ देख्यौ र बाटो तिम्रो उजेली गर्न रवि बनेँ ...